भुटानमा 'घो' र 'किरा'मा दशैं : राजा केशरले लगाइदिए टीका. Break n Links: Media for all - Across the globe
भुटानमा 'घो' र 'किरा'मा दशैं : राजा केशरले लगाइदिए टीका
भुटानका राजा जिग्मे केशरले हिन्दू धर्मवालम्वी भुटानी नागरिकलाई टीका लगाइदिएका छन् ।
राजधानी थिम्पूको कुइन्सेलफोद्रङस्थित देवी पञ्चायन मन्दिरमा उनले मंगलबार टीका लगाइदिएका हुन् ।
राजा केशरको हातबाट टीका लगाउन देशका विभिन्न भागबाट ठूलो संख्यामा हिन्दू धर्मवालम्वी सर्वसाधारण भुटानीहरू देवी पञ्चायन मन्दिर पुगेका थिए ।
राजाबाट ढिलै भए पनि हिन्दुहरूको धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मान भएको छ ।
घो र किरामा सजिएर त्यहाँ पुगेका हिन्दूहरूलाई उनीहरूको जातीय र धार्मिक भेषभूषामा टिका थाप्न भने बन्देज लगाइएको थियो । यो दृश्य भने अलि नमिलेको जस्तो देखिएको थियो ।
राजा केशरका बाबु तत्कालिन राजा जिग्मे सिंग्मेलाई हिन्दू धर्मवालम्वी नेपाली मूलका भुटानीलाई देश निकाला गरेर धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेको आरोप लागेको थियो । त्यही बेला यो मन्दिर पनि भुटानी जिग्मे सत्ताको कोपभाजनको शिकार भएको थियो ।
बाबुले स्वेच्छाले सत्ता छोडेपछि राजा केशरले मन्दिरको जिर्णोद्धार गरेर यही अक्टोबर १ मा हिन्दू समुदायलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यहाँको सरकारले यसलाई राजाका तर्फबाट हिन्दू समुदायलाई उपहार भनेको थियो ।
'घो र किरामा दशै टीका- योभन्दा हाँस्यास्पद अरू के हुन सक्छ र ?
राजा केशरको यो टीका प्रकरणले भुटानिभत्र र भुटानबाट निर्वासित नेपाली मुलका भुटानीमा मिश्रित प्रतिक्रिया मिलेको छ । केहीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । उनीहरूको भनाइ छ - 'राजाबाट ढिलै भए पनि हिन्दुहरूको धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मान भएको छ । यसले एक किसिको सकारात्मक सन्देश जान्छ ।'
तर, योभन्दा भिन्न बिचार बोक्ने भुटानीहरूले यस टीका प्रकरणलाई राजा केशरको नाटक भनेका छन् । उनीहरूको विचारमा यो हिन्दुहरूलाई सम्मान गरेजस्तो देखाएर संसारका आँखामा छारो हाल्ने केशरको रणनीति मात्र हो । उनीहरूको प्रश्न छ- 'घो र किरामा दशै टीका- योभन्दा हाँस्यास्पद अरू के हुन सक्छ र ?
ओमनमा 'परदेशमा घरदेश'
भारतमा उपनिर्वाचन: महाराष्ट्रमा ५४ र हरियाणामा ६५ प्रतिशत मतदान
अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैनिक फर्किहाल्ने अवस्था छैन: अमेरिकी रक्षामन्त्री
नयाँदिल्ली र आसपासको क्षेत्र प्रदूषणयुक्त वायुले ढाकिन थाल्यो